Shambadzira Retail Inventory Yako Pamhepo neMilo | Martech Zone
Shambadzira Yako Retail Inventory Pamhepo neMilo
Chitatu, November 16, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakataura naRob Eroh, uyo anomhanyisa zvigadzirwa uye zvikwata zveinjiniya ku Milo. Milo inzvimbo yekutenga yekutsvagisa injini inosanganisirwa yakananga kune mutengesi wePoint of Sale (POS) kana Enterprise Resource Planning (ERP). Izvi zvinobvumidza Milo kuve yakanyatso tsvaga injini yekutsvaga kana zvasvika pakutsvaga zvinhu mune yekuverenga mudunhu rako. Chinangwa chaMilo ndechekuti Iva nezvigadzirwa zvese pasherufu yega yega munyaya dzese pawebhu… Pamwe nekuderedza kunetseka kwekutenga pamhepo nekunze. Vari kuita basa rakanaka chose!
Iyo kambani iri diki pazera re2.5 yemakore asi vatove nevanopfuura vatengesi zana nemakumi mana vane nzvimbo zviuru makumi mashanu muUnited States uye vari kuwedzera zvimwe mazuva ese. Iyo yakapusa sisitimu inopa seyakanaka inotyisa sevhisi. Milo inorova musika muhombe… vatengi vanoida izvozvi uye vasingade kumirira kuendeswa (seni!). Hapana chimwe chinhu chinoshungurudza sekuratidzira kuchitoro uye kuva nazvo zvisipo… saka Milo akazvichengeta izvo, futi. Heano muenzaniso wekutsvaga kwandakaita kuLCD Terevhizheni kutenderedza Indianapolis:
Chinokosha pakubudirira kwaMilo chave chekuti vakatora kuyedza kubva mukubatanidza… pachokwadi, vakatanga Milo Fetch, sevhisi yebeta uye kusangana neIntuit QuickBooks Point yekutengesa, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Retail Management System, Retail Pro uye Comcash Point yekutengesa.
Milo inventory yatove kuwanikwa kuburikidza RedLaser, yemahara scanning app ye iPhone uye Android. Milo inowanikwawo kare paiyo Android. Uye muna 2012 Milo iri kubatanidzwa mune mamwe eBay mobile apps. Kunze kwekungotsvaga, Milo iri kuyedzawo chema Checkout maficha, futi. Fungidzira kuti… tsvaga chinhu, chitenge, uye buda kunze kwechitoro icho chiri nacho mudura kukona!
Kana iwe uri mutengesi, tora yako inventory pamhepo izvozvi ne Milo.
Tags: Comcash Nzvimbo yekutengesaebayIntuit QuickBooks Nzvimbo yekutengesaIntuit Quickbook Prokutsvaga kwekutenga kwemunoMicrosoft Dynamics Retail Management Sisitimumilokutora miloRetail Pro
LinkedIn Basic Boot Musasa
Doug, izvi zvinondiyeuchidza zvishoma nezveZaarly uye zvandinoda, TaskRabbit.